ICT for Myanmar: Gmail ရဲ့ Last Account Activity Feature
Gmail ရဲ့ Last Account Activity Feature
သူငယ်ချင်းတယောက်က ဖုန်းထဲကနေပြောလာပါတယ်…သူ့ Gmail ကို စစ်တော့ Gmail ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနားမှာ… သူ့ Gmail ကို America ကနေ သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့… သူက ရန်ကုန်မှာပါ…
ဒါနဲ့ သူလည်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီးမေးတာပါ..
ဒါက ဒီလိုဗျ…ခုတလော… internet connection က…. Gmail, Gtalk ဝင်နေတုန်းမှာ… ပြုတ်ကျသွားလိုက်… ပြန်တက်လာလိုက်နဲ့ တော်တော်ကို အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောလို့ သိရပါတယ်… ကို်ယ်တိုင်လည်း ကြုံနေရပါတယ်လေ….
အဲဒီမှာ ပြဿနာက စတယ်ဗျ…
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့…Connection Down သွားတဲ့အချိန်မှာ Gmail , Gtalk က Auto Reconnect လုပ်နေပါရော… ဒါပေမယ့် မရဘူး..ဗျ… သုံးတဲ့သူကလည်း… စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်ပါတယ်… ရနိုးနိုးနဲ့ပေါ့…
ဒါပေမယ့် မရပါဘူး… နောက်ဆုံးမှာ… Gmail Account ကို Sign Out တောင်မလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုပါတော့…
ဒီအချိန်မှာ… ကိုယ့် Gmail , Gtalk ကို Hack လုပ်ဖို့ အခြေအနေ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ်…
Password ကျန်ခဲ့လို့ပါ… ဒီတော့… Connection ပြန်ရလို့ Gmail , Gtalk ပြန်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ့် Gmail ကို တယောက်ယောက် ခိုးကြည့်ထားလား… ဆိုတာ စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ Last Account Activity ဆိုတဲ့ Feature တခု Gmail မှာပါပါတယ်… အောက်က ပုံလေးမှာကြည့်ကြည့်ပါ…
Gmail ရဲ့ inbox အောက် ဟိုး…အောက်ဆုံးမှာပါ…
Gmail သုံးခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။
Details ကို နိှပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Gmail Account ကို ဘယ်အချိန်တုန်းက ဘယ် IP ကနေ ဘယ်လို Browser ကို သုံးပြီး Access လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။
Last Account Activity ရဲ့ Details မှာ ပေါ်နေတာက ကိုယ့် IP မဟုတ်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ Gmail ကို ခိုးသုံးနေတာ သေချာပြီပေါ့။
ကိုယ့် Gmail ကို နေရာမျိုးစုံကနေ သုံးခဲ့ဖူးမယ်ဆိုပါစို့။ တခါတလေမှာ မေ့သွားတာမျိုးကြောင့် Sign Out မလုပ်ခဲ့ရဖူးဆိုရင်လည်း Detail Page မှာ Sign Out All Other Sessions Button ကို နိှပ်ပြီး Sign Out လုပ်လို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ အဲဒီလို Button လေး မပါဘူးဆိုရင်တော့ Sign Out လုပ်ဖို့ မမေ့ခဲ့ဘူးလို့ပါ။ Concurrent Sessions လို့ပေါ်နေရင်တော့ ဒီ Gmail Account ကို တချိန်တည်းမှာ နှစ်ယောက်သုံးနေလို့ပါ။
Password ကိုသာ ချက်ချင်း ပြောင်းပစ်လိုက်တော့ပေါ့။
ဒါမျိုးတွေက… သိပ်ယုံကြည့်လို့မရတဲ့ Social Network Site တွေ က နေလည်း လုပ်တတ်ပါတယ်။
Callback Services: What is it?
D-DoS: The easy way to server down
ပြည်တွင်း Blogger တို့အတွက် Phzilla: Add-ons for F...
ရတနာပုံ Website Hack လုပ်ခံရခြင်း
Common key cryptography
Proxy site for banned website
ကိုယ့်ရဲ့ Blog ကို Google,Yahoo နဲ့ Bing Search En...
Unbuntu ကို အစိမ်းလိုက်ဝါးစားခြင်း
နည်းနည်းတော့ ပေါက် လာပြီဗျာ...
Encryption နှင့် Decryption အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Removable device တွေကို access deny လုပ်ကြည့်မယ်
RADIUS Server ဆိုတာ...
သဘောကျမိတဲ့ Firefox Add-on လေး
Firefox ၏ မပြုပြင်ရသေးသော အားနည်းချက်မှ တိုက်ခိုက်...
Sony Ericsson PlayStation Phone ကို Hard Reset လုပ...
Motorola Droid R2-D2 ကို Hard Reset လုပ်နည်း အဆင့်...
Samsung Mesmerize ကို Hard Reset လုပ်နည်းများ